နိုင်ဂျီးရီးယားအနောက်တောင်ပိုင်းမြို့ပြဒေသရှိလူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏လွှမ်းမိုးမှု (2016) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
ပန် Afr Med J ကို။ 2016; 25: 261 ။
2016 ဒီဇင်ဘာ 30 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.11604 / pamj.2016.25.261.2630
Oyedunni Sola Arulogun,1,& Ifeyinwa Arinze Ogbu,1,2 နှင့် ဣဇာက်သည် Oluwafemi Dipeolu1
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့လူငယ်များ၏အချိုးအစားတိုးပွားလာနေသည်။ သို့သော်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထိတွေ့မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပြည့်အဝစူးစမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒီလေ့လာမှုကထိုကွောငျ့အနောက်တောင်ဘက်နိုင်ဂျီးရီးယား၏ Ibadan မြောက်အမေရိကဒေသခံအစိုးရဧရိယာထဲမှာငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
413 ငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏စစ်တမ်းအင်တာနက်ထိတွေ့မှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်မေးခွန်းများကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ pretested ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေးခွန်းလွှာသုံးပြီးပြုလေ၏။ ဒေတာကိုဖော်ပြရန်စာရင်းဇယား, Chi-စတုရန်းစမ်းသပ် and Logistic ဆုတ်ယုတ်သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသမီး၏ 21.7 ± 3.4 နှစ်ပေါင်းနေစဉ်ယောက်ျား၏အသက်အရွယ် 20.9 ± 3.2 နှစ်ပေါင်းခဲ့ဆိုလို။ ဖြေဆိုသူလေးဆယ်ကိုးရာခိုင်နှုန်းဟာ 15-19 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်အကြားပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အင်တာနက်အကြောင်းကိုအချက်အလက်များ၏အဓိကအရင်းအမြစ်သူငယ်ချင်းများကို (63.3%) နှင့် 99.3% ချက်တွေကိုဆိုင်ဘာကဖေးကနေအင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်။ ခုနစ်ဆယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအစဉ်အဆက်ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်လဲခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုဟာဆိုဒ်များ (45.2%), ပိတ်သိမ်း (38.5%) ပိတ်, နောက်ပိုင်းတွင် (12.5%) ကြည့်ရှုရန်စာမျက်နှာကိုအသေးအဖွဲမတိုင်မီမှတဆင့်ဟယ်ပါဝင်သည်။ အပြုအမူအပေါ် post-ထိတွေ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် (48.3%) နှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း (18.3%) ရှိခြင်း, ပါးစပ်လိင် (11.6%) ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, ခန္ဓာကိုယ်တက်တူး (5.0%) ပါဝင်သည်။ ပိုများသောအထီး (95% CI OR = 1.245-6.465) နှင့်မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည် (95% CI OR = 1.168-3.497) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။
keywords: အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ, ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
အင်တာနက်ကိုကွန်ပျူတာကမကထပြုခဲ့ဆက်သွယ်ရေး၏အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ [ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များကိုသန်းပေါင်းများစွာကိုဆက်သွယ်, သတင်းအချက်အလက်မြီးကောင်ပေါက်တစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခင်းကျင်း access လုပ်နိုင်ပေး1] ကြောင့်ယင်း၏အရည်စွမ်းရည်၏, အင်တာနက်စာအုပ်များထက်ပိုမိုကို up-to-date ဖြစ်အောင်သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့လူငယ်များ ပို. ပို. ကမ္ဘာတဝှမ်းကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်လူမှုစီးပွားရေးအုပ်စုများအတွက်အသုံးပြုမှုအတွက်သိသိသာသာအပြောင်းအလဲရှိနေသော်လည်း, အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. ရသည်။ လူငယ်များ၏ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ key ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအရာတို့သည်မိမိတို့ဖှံ့ဖွိုးတိုးမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအရင်းအမြစ်များကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန် [အနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်ဖို့သံသယရှိသူသောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုလမ်းအကြောင်းကိုအစောပိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်2, 3] ။ Fleming က et al နေဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ကဲ့သို့သောအခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ  မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများကိုမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုလည်းပါဝင်သည်။ ဆိုက်ဘာစပေ့ထဲမှာတစ်ခုမှာအဓိကထွန်းသစ်စစိုးရိမ်ဖွယ်အတိုင်းအတာသတင်းများအရမကြုံစဖူးနှင့်ကွဲပြားခြားနားနည်းလမ်းလူငယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် mainstream ရာ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောအသွင်ညစ်ညမ်းဖြစ်ပါတယ် [5-7] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရေလွှမ်းမိုး  Häggström-Nordin, Sandberg, Hanson နှင့်Tydén  နှင့် Wolak, Mitchell နှင့် Finkelhor , အင်တာနက်-enabled devices တွေကိုသိမ်းကျုံးအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူကြုံတွေ့ရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ဘူးသောမှတ်တမ်းတင်လောင်, ဖန်တီး, ဤဖြစ်ရပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အကြား ပို. ပို. အဖြစ်များဖြစ်ကြောင်းကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူလိင်ကအကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ ဤအတိုးအပေါ်ဖြစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းများရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်မတော်တဆကြည့်ရှုတော်မူပြီ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အဆိုပါ teeming လူငယ်၏ဘဝနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကလေးများအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပင်ကိုယ်မူလ data တွေကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်မဟုတ်ပေမယ့်, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏ 32%7နှစ်အသက်အပိုင်းအခြား 18 ၏ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များမှာဆိုတဲ့အချက်ကိုအရေးပါသောအချက်ဖြစ်ပါသည် ကြောင်းမှတ်ချက်ခံထိုက်ပေ၏။ စိုးရိမ်မှုတွေ [obnoxious နှင့်ဆင်ဆာပိတ်ထားသောဝက်ဆိုက်များပေါ်မှအင်တာနက်ကို contents တွေကိုအသုံးပြုသူများနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အထူးသဖြင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကွဲပြားအမျိုးအစားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာအပေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ချေအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုအချို့သောကဏ္ဍများတွင်တွေထူပြောနေတယ်ဆိုပြီး11].
အများအပြားကလေ့လာမှုများ [Ojedokun ၏အပါအဝင်အာဖရိကမှာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအပေါ်ပြုမိပါပြီ12] ဘော့ဆွာနာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုလေ့လာခဲ့တဲ့သူ။ မိမိအလေ့လာမှုဖြေဆိုသူ 77% ကအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Ajuwon  ပထမနှစ်တွင်အားဖြင့် Ibadan, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဆေးရုံမှလက်တွေ့နှင့်သူနာပြုကျောင်းသူကျောင်းသားများကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုလေ့လာခဲ့နှင့်ဖြေဆိုသူ 60% ကအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Odusanya နှင့် Bamgbala  နောက်ဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရနိုင်ဂျီးရီးယား၊ လာဂို့စ်တက္ကသိုလ်၌သူတို့နောက်ဆုံးနှစ်တွင်ဆေးနှင့်သွားကျောင်းသား ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များစွာသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အချိန်များစွာဖြုန်းနေကြသောကြောင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများ၏ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူ၊ သုခချမ်းသာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိရှိနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ လူမှုလေ့လာမှုသီအိုရီ၏ခန့်မှန်းချက်အရအချို့သောသမားရိုးကျမဟုတ်သောအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက်များသည်သမားရိုးကျကဲ့သို့သောအပြုအမူများကိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်သည်။ လူငယ်များကြားတွင်အင်တာနက်၏လူကြိုက်များမှုကြောင့်သုတေသီအချို့ကအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (အွန်လိုင်းချတ်များ၊ မိတ်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများရှာဖွေခြင်းများ) နှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအကြားလူငယ်များ၏ပါ ၀ င်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ Cooper et al  အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှု (အွန်လိုင်းလိင်နှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာကြည့်ရှုအတွက်သုံးစွဲအချိန်အားဖြင့်တိုင်းတာကဲ့သို့) အပြုသဘောစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံရှာကြံရန်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Goodson et al အားဖြင့်ကောက်ယူအလားတူလေ့လာမှု  တွင် Adebayo et al  တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်လိင်ဖျော်ဖြေမှုရှာဖွေခြင်းအပေါ်ဖြေကြားသူများ၏သဘောထားသည်သူတို့၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ အထူးသဖြင့်နိုင်ဂျီးရီးယားရှိလူငယ်များအကြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုမြင့်တက်နေသော်လည်းလေ့လာချက်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သောဆိုဒ်များသည်အထူးသဖြင့်လူငယ်များ၏လိင်စိတ်နိုးထမှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုသည်နိုင်ဂျီးရီးယားအနောက်တောင်ဘက်အီဘန်ဒန်မက်ထရိုပိုလစ်စ်၏မြို့ပြခရိုင်၊ အီဘဒန်မြောက်ပိုင်းဒေသန္တရအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအတွင်းရှိဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
သုတေသနပုံစံ: ငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတ်တမ်းတင်ရည်ရွယ်ဒါကဖော်ပြရန်နှင့် Cross-Section လေ့လာမှု။ ဒါဟာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အတွက်စေ့စပ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပျံ့နှံ့သိရှိနိုင်ဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။
လေ့လာမှုဆက်တင်: Ibadan မြောက်အမေရိကဒေသခံအစိုးရဧရိယာ (LGA) ကိုလေ့လာမှု setting ကိုရှိပါသည်။ ဒါဟာ Ibadan မြို့တော်အတွင်းငါး LGAs တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသုံးမဝင်တော့ Ibadan စည်ပင်သာယာအစိုးရထဲက 27th စက်တင်ဘာလ 1991 အပေါ်နေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ LGA multi-တိုင်းရင်းသားလူဦးရေနှင့်အတူ 12 နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရပ်ကွက်၏ပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Ibadan တက္ကသိုလ်က The Polytechnic Ibadan, 78 အများပြည်သူနှင့် 48 ပုဂ္ဂလိကမူလတန်းကျောင်းများအဖြစ် 80 အများပြည်သူနှင့် 20 ပုဂ္ဂလိကအလယ်တန်းကျောင်းများအဖြစ် LGA အတွက်မြောက်မြားစွာပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။ အဲဒီမှာအပေါငျးတို့သ LGA ကျော်ချက်တွေကိုဆိုင်ဘာကဖေး၏အတော်လေးနံပါတ်ဖြစ်ကြပြီးအသေးလမ်းများမှမြို့လယ်ကနေအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားရှိပါတယ်။ ဤအချက်တွေကိုဆိုင်ဘာကဖေးများအများစု LGA ၏ Agbowo, Polytechnic နှင့် Bodija ဒေသများရှိပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများန်းကျင်အာရုံစိုက်နေကြသည်။
နမူနာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နမူနာအရွယ်အစား: , stratified အချိုးကျနဲ့ရိုးရိုးကျပန်းနမူနာနည်းစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တစ်ဦးကလေးဇာတ်စင်နမူနာ technique ကိုဒေသခံအစိုးရဒေသများရှိအိမ်ထောင်စုများမှ 413 ငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်မွေးစားခဲ့ပါတယ်။ ပထမအဆင့်မှာတော့ငါးရပ်ကွက်ဒုတိယအငါးလမ်းများကျပန်း Ibadan မြောက်အမေရိက LGA အတွက်လေ့လာမှုအတှကျရှေးခယျြထားသောငါးရပ်ကွက်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်ခဲ့ကြသည် Ibadan မြောက်အမေရိက LGA အတွက်တဆယ်နှစ်လုံးကိုရပ်ကွက်, ထဲကရှေးခယျြထားခဲ့ကြသည်။ ဇာတ်စင်လေးအိမ်ထောင်စုများထံမှ 413 ရထိုက်ခွင့်ဖြေဆိုသူ၏ရွေးချယ်ရေးပါဝင်ပတ်သက်နေချိန်တွင်ဇာတ်စင်သုံးခုမှာတော့အိမ်ထောင်စုစနစ်တကျလေ့လာမှုအတှကျရှေးခယျြထားသောလမ်းများအတွင်းကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။
ဒေတာစုဆောင်းခြင်းများအတွက်တူရိယာ: အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခြုံငုံလှုပ်ရှားမှုနဲ့အလေ့အကျင့်အပေါ်မေးခွန်းများကိုပါရှိသောအရာတစ်ဦးက pretested ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Semi-ဖွဲ့စည်းပုံမှာမေးခွန်းလွှာ, ထိတွေ့မှုအပြီးညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုဒေတာစုဆောင်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒေတာများစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်: တစ်ခုချင်းစီကိုအင်တာဗျူးလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအပါအဝင်သုတေသနလုပ်ငန်းတစ်ခုမိတ်ဆက်နှင့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါဖြေဆိုသူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေးခွန်းလွှာအပေါ်မည်သည့်ဘွဲ့နာမရေးသားဖို့မဟုတ်ဘူးပြောတယ်။ ဖြေဆိုသူသူတို့မေးခွန်းလွှာအတွက်နားမလည်သောအရာကိုအပေါ်မေးခွန်းများကိုမေးရန်အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။ လိုအပ်သောအဖြစ်ရှင်းလင်းချက်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောစည်းကမ်းချက်များကိုသူတို့ရဲ့နားလည်မှုကူညီမှဖြေဆိုသူအားပေးပြီးမှခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းအားချက်ချင်းပြီးစီးပြီးနောက်ကျောချင်းစီတုံ့ပြန်ထံမှထုတ်ယူခဲ့ကြသည်သူတို့ပြည့်စုံဘို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
ဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်တင်ဆက်မှု: မေးခွန်းလွှာများအုပ်ချုပ်ခွင့်ရမိတ္တူတစ်နိုင်တဲ့ coding လမ်းညွှန်၏အကူအညီနှင့်အတူ edited နှင့် coded ခဲ့ကြသည်။ coded data တွေကိုလူမှုရေးသိပ္ပံများအတွက် IBM က / စာရင်းအင်းပက်ကေ့ (SPSS) ဗားရှင်း 15.0 သုံးပြီးဆန်းစစ်ဘို့ကွန်ပျူတာထဲသို့ဝငျခဲ့သညျ။ ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများ, ပျမ်းမျှခြင်းနှင့်စံသွေဖီအဖြစ်အနှစ်ချုပ်စာရင်းဇယားအရေအတွက် variable တွေကိုအနှစ်ချုပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အမျိုးအစား variable တွေကိုအကြားအသင်း Chi စတုရန်းစမ်းသပ် အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အရေးယူညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြုံနေရအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်သတင်းပို့ပြောင်းလဲမှု: Logistics ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှစ်ခုမှီခို variable တွေကို၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ဖို့ပြုလေ၏။ အဓိပ်ပာယျ၏ level p = 0.05 မှာခဲ့ပါတယ်။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားသုံးသပ်: အဆိုပါလေ့လာမှုသုတေသနလူ့သင်တန်းသားများကိုအသုံးပြုခြင်းလမ်းညွှန်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ လေ့လာမှု site ကိုဝင်ရောက်မတိုင်မီကလေ့လာမှုထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုချက်သက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းတံခါးဝအစောင့်အထိန်းအနေဖြင့်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာလူငယ်၏မိဘများထံမှရရှိသောခဲ့သည်။ အားလုံးဖြေဆိုသူစစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်မှုမိမိဆန္ဒအလျောက်ခဲ့ကြောင်းအကြောင်းကြားနှင့်သူတို့ဖို့ရှေးခယျြသို့မဟုတ်မည်သည့်အချိန်တွင်မပါဝင်ထံမှထုတ်ယူနိုင်လျှင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မပြုစေခြင်းငှါခဲ့ကြသည်။ ဖြေဆိုသူတုံ့ပြန်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်များဒေတာစုဆောင်းခြင်းစဉ်နှင့်အပြီးထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ချပါခဲ့ကြသည်။ သာနံပါတ်များကိုဒေတာ entry ကိုဆန်းစစ်လေ့လာရန်နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်တာဝန်ကျအဘယ်သူမျှမတာဝန်ပေးအပ်နံပါတ်များနှင့်အတူဖြေဆိုသူရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာလင့်ထားသည်နိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ဖြင့်မေးခွန်းလွှာများ၏မိတ္တူသူတို့ကိုပေးထားသောခင်သဘောတူညီခကျြတစျခုစီဖြေဆိုသူထံမှရရှိသောခဲ့သည်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
ဖြေဆိုသူများ၏လူမှု - လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအရသုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည်အသက် ၂၀ မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း၊ ၂၉.၈% သည်အနှစ် ၂၀ နှစ်အောက်ကလေးများဖြစ်ပြီး ၆% ကသူတို့အသက်ကိုမဖော်ပြခဲ့ပါ။ အမျိုးသမီးဖြေဆိုသူ (၂၈.၆%) ထက်အမျိုးသားများ (၇၀.၅%) ပိုများသည်။ ဖြေဆိုသူအမြင့်ဆုံးအချိုးအစားတွင်အဆင့်မြင့်ပညာရေး (၆၀.၃%)၊ အထက်တန်း (၂၃.၅%)၊ အငယ်တန်းအလယ်တန်း (၁.၂%) နှင့်မူလတန်း (၀.၂%) အသီးသီးရှိကြပါသည်။ ကျောင်းပြင်ပရှိဖြေဆိုသူအချိုးသည် ၁၃.၁% ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ယိုရူဘာအများစု (၇၆.၅%) ဖြစ်ပြီးအစ်ဂဘို (၁၈.၄%)၊ ဟာဟာစာ (၂.၄%) နှင့်အခြားသူများ (၁.၅%) တို့ဖြစ်ကြသည်။ မွတ်စလင်များထက် (၈၃.၈%) တွင်ခရစ်ယာန်များပိုမိုများပြားသည် (၁၄.၈%) ။
ဖြေဆိုသူထက်ဝက်ခန့် (49.2%) ကိုချက်တွေကိုဆိုင်ဘာကဖေးကနေန်ဆောင်မှု 15-19 နှစ်အကြားကအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးနှင့် 99.3% access ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကြောင်းကိုအချက်အလက်များ၏အဓိကအရင်းအမြစ်သူငယ်ချင်းများကို (63.3%) ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုမှု frequency 29.5% နေ့တိုင်းအင်တာနက်ကိုရယူကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းသုံးစွဲအချိန် Duration: (30 မိနစ်ကနေသုံးနာရီအရွယ်ရှိစားပွဲတင် 1) ။ လက်ရှိဖြစ်ရပ်များ (55%), ပြည်ပမှာကျောင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် (34.1%), ဂီတ downloads, အကြောင်းကိုထည့်သွင်း, ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ဖတ်နေမေးလ် (31%), လိုင်းပေါ် (27.6%) chatting, သုတေသန / ​​အိမ်စာ (24.9%) သတင်းအချက်အလက်အတွက်စေ့စပ်ပင်မလှုပ်ရှားမှုများ (18.6%), အလုပ်ရှာဖွေရေး (16.2%) နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်း (12.6%) ကစားခြင်း။ ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်း 8.0% အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် 3.6% ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များတွင်သတင်းအချက်အလက်ဆည်းကပ်ခဲ့သည်။
စားပွဲတင်2ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုအပေါ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်လဲခဲ့တဲ့မြီးကောင်ပေါက်များ၏အချိုးအစားပြသထားတယ်။ လိင်ကွဲပြားခြားနားမှုသည့်ဆိုဒ်များဖို့တုံ့ပြန်မှုအတွက်သတိပြုမိခဲ့သည်: 45.2% (အမျိုးသမီး, 30.1%; အထီး, 46.7%) ပိတ်မတိုင်မီမှတဆင့်ဟယ်, အဆိုဒ်များပိတ်သိမ်း 38.5% (အမျိုးသမီး, 57.5%; အထီး, 38.7%), နဲ့စာမျက်နှာအသေးအဖွဲ နောက်ပိုင်းမှာ 12.6% (; အထီး, 12.3% အမျိုးသမီး, 13.6%) ကြည့်ရှုရန်။ ဖြေဆိုသူသူတို့အင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ရှုအားပေးအဘယ်အရာကိုဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းရှိမရှိတွင်, ဖြေဆိုသူ 55.2% 32.6% အတူတူလိင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေးနွေးဘယ်သူ့ကိုမှနှင့်အတူကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများကိုဆှေးနှေးဘယ်တော့မှ / 9.6% ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏မိတ်ဆွေများကအတူအတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေသာ 2.6% မိဘနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည် အုပ်ထိန်းသူ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများသတင်းများအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များမှထိတွေ့မှုကအောက်ပါဖြေဆိုသူ 31.1% တို့ကလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့် 19.5% ကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျအဘယျသို့ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ Post-ထိတွေ့မှုအတွက်စေ့စပ်အလေ့အကျင့် (ပါးစပ်လိင် (48.3%), ခန္ဓာကိုယ်တက်တူး (18.3%), မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်း (11.6%) နှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း (5.0%) ထည့်သွင်းပုံ 1) ။ နေ့စဉ်အသုံးပြုသူများ (95% CI OR = 1.168 - 3.497) နှင့်အထီး (95% CI OR = -1.245 - 6.465) သည်အခြားဖြေဆိုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့အလွယ်တကူသွားရောက်နိုင်သည်။
အထီးအကြားကအင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏မြင့်ပျံ့နှံ့ယောက်ျားအမျိုးသမီးထက်ပြောင်းပြန်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့လမ်းကြောင်းသစ်နည်းပညာပိုမိုရှိုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါချက်တွေကိုဆိုင်ဘာကဖေး power supply ၏အခြားရွေးချယ်စရာအရင်းအမြစ်ရှိသည်အဖြစ်ချက်တွေကိုဆိုင်ဘာကဖေးကနေအင်တာနက်ဖြေဆိုသူမြင့်မားအရေအတွက်ကတိုင်းပြည်အတွင်းမတည်မငြိမ်လျှပ်စစ်မီးပေးဝေရေးစဉ်းစားမမျှော်လင့်ဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ပြင်လည်းcybercaféသွားမိတ်ဆွေများကအင်တာနက်ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ပါသောတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့သည့်လူမှုရေးကွန်ရက်များအတွက် Avenue ပေးပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာပိုမိုအစဉ်အဆက်သူစိမ်းတွေနဲ့ဝန်ခံဆွေးနွေးခြင်းဆက်ဆံရေး chatting အွန်လိုင်းခဲ့သူကိုဖြေဆိုသူထက်ဝက်ကျော်။ ဤသည်လမ်းကြောင်းသစ်တိုးပွားလာသည်နှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မကြာသေးမီကာလ၌တစ်ဦးဝမ်းနည်းဖွယ်အတိုင်းအတာယူဆထားသည်။ ထိုလူငယ်ပုဂ္ဂိုလ်များမရိုးသားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကာကှယျခံရဖို့ရှိပါတယ်လျှင်ဒီပြောင်းပြန်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲခြင်းအနည်းဆုံးဖော်ပြထားခြင်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်လိုင်းအတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအင်တာနက်ဆိုက်များတွင်မဟုတ်လူငယ်-ဖော်ရွေသဘောသဘာဝနှင့်အတူ unconnected မည်မဟုတ်ပါ။ လွယ်ကူသောနားလည်မှုအဘို့အလုံလောက်အောင်ရိုးရှင်းသောမကျမည်အကြောင်းအရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းသုံးပြီးက်ဘ်ဆိုက်များပစ္စုပ္ပန်အချက်အလက်များ၏အများစုမှာ။ ဤသည် Osakinle နေဖြင့်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်မေးလ်, chatting ဖတ်ပေးပို့ခြင်းများတွင်ပါဝင်နေသူအမြောက်အများများအတွက်အကောင့်ဖြစ်နိုင်သည် .
ထိုလုလင်သည်လူအများစုမှာသူတို့အများစုကသူတို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူပြုကြောင်းဘယ်သူ့ကိုမှနှင့်အနည်းငယ်နှင့်အတူအင်တာနက်ပေါ်ရှိခဲ့အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှမပေးခဲ့ပါဘူးမေးမြန်းထားသည်။ ငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြားသတင်းမှားများနှင့် / သို့မဟုတ်အယူအဆမှား၏ပမာဏကလိင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှပြောပြတယ်အဖြစ်ဒါမှဖြေရှင်းခံရဖို့ဒါဟာလိုအပ်သည့် barest နိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချနေကြသည်။ ညံ့ဖျင်းသောမိဘကလေးဆက်သွယ်ရေးကိုလည်းဒီလေ့လာမှုမှာအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဤသည်မိဘများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကိစ္စများပတ်ဝန်းကျင်ယဉ်ကျေးမှုစံချိန်စံညွှန်းကမီးလောင်ရာသောသူတို့သားငယ်များနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများဆွေးနွေးရန်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားတဲ့မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ unconnected မည်မဟုတ်ပါ။ မိဘများကသူတို့ငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များမှထွက်ရောက်ရှိနိုင်ဘို့, သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အဲဒီဒေသမှာခိုင်ခံ့စေ၏ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထို့အပွငျ, ဒီလေ့လာမှု [ယောက်ျားအမျိုးသမီးထက်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေညစ်ညမ်းဆီသို့ပိုပြီးအပြုသဘောသတင်းပို့ကြောင်းယခင်စာရွက်စာတမ်းများခိုင်မာသွား19, 20] ။ အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲခြင်း၏ frequency သိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များ၏အကြောင်းအရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒါက [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များကိုတုပနှင့်ကူးယူမှတဆင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမော်ဒယ်များမှထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်အစောပိုင်းကတွေ့ရှိချက် corroborates17, 21, 22] ။ တစ်ဦးကသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကျားနှင့်ကြိမ်နှုန်းအဘို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းပစ္စည်းများမှထိတွေ့မှုအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားအရေးယူအကြားမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီးထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့ခြင်းမှအပျက်သဘောတုံ့ပြန်မှပိုပြီးခဲ့ကြသည်နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအလည်အပတ်ခရီးညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားအရေးယူ၌ဤကျားခြားနားချက်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ corroborates [17, 23, 24] ။ ဒါ့အပြင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းသိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုများ၏အလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အသင်းအဖွဲ့၏ဤဒီဂရီ [Inyang အစီရင်ခံထားသည်20] Egbochukwu et al  Odeyemi et al  နှင့်ဘရောင်း et al .
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပြောင်းလဲမှုတွေ့ကြုံခံစားဖို့အမျိုးသမီးထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိသည်အခြားဖြေဆိုသူနှင့်ယောက်ျားပေါင်းထက်ညစ်ညမ်း site ကိုကြည့်ရှုရန် ပို. ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါက [ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်အပြုအမူတိမ်းညွတ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကျားနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုတွေ့ပြီကြောင့်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်17, 27].
ဒီလေ့လာမှုကငယ်ရွယ်သူတစ်ဦးအကြားကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုမြင့်မားပျံ့နှံ့ပါရှိသည်။ ဒါဟာအစမကြာခဏအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုသိသာခန့်မှန်းအဖြစ်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မီးမောင်းထိုးပြအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆင်းရဲသားကိုမိဘကလေးဆက်သွယ်ရေး re-အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုအပြည့်အဝပညာရေးဆိုင်ရာအလားအလာငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့သဘောပေါက်ခံရဖို့ပါလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, multi-pronged ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု, ငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များပစ်မှတ်ထားတိုးတက်လာသောဆက်သွယ်ရေးများအတွက်မိဘများ၏စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ချက်တွေကိုဆိုင်ဘာကဖေး၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်တင်းကြပ်လမ်းညွှန်ချက်များစတင်ကျင်းပလိုအပ်ပေသည်။
အဘယ်အရာကိုဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်
ပညာရေး၏ level အင်တာနက်ရန်အတားအဆီးမဟုတ်ခဲ့,
အားလုံးစာရေးဆရာများ ICJME ရေးသားခဲ့သောစံတွေနဲ့ကိုက်ညီနည်းလမ်းတွေ၌ဤလေ့လာမှုမှလှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။ လူအားလုံးတို့သည်စာရေးဆရာများကိုဖတ်နှင့်ဤစာမူကို၏နောက်ဆုံး version ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
1 ။ Strasburger VC ကို, Wilson က BJ, ဂျော်ဒန်အေသားသမီးတို့, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်မီဒီယာ။ ed 2nd ။ တထောင်သပိတ်, CA: Sage; 2009 ။
2 ။ Sackson အမ်ပထမဦးစွာနှစ်ပတ်လည်ကျင့်ဝတ်ညီလာခံ။ Loyola University ကချီကာဂိုမှရယူရန်, Computer ကိုကျင့်ဝတ်: ကျောင်းသားများပူပန်နေကြသည်။ web site ကို http://www.math.luc.edu/ethics96/papers/sackson.doc။ 1996: မတ်လ9။ မတ်လ 22, 2013 အပေါ်ဝင်ရောက်။
3 ။ Kraut RE, ပက်က M, Lundmark V ကို, Kiesler S က, Mukhopadhyay T က, Scherlis ဒဗလျူကအင်တာနက်ဝိရောဓိ: လူမှုရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာကိုလျော့နည်းစေမယ့်လူမှုရေးနည်းပညာ? နံနက် Psychol ။ 1998; 53 (9): 1017-1032 ။ [PubMed]
ဆိုက်ဘာပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ Fleming MJ, Greentree S, Cocotti-Muller D, Elias KA, Morrison S. Safety - အွန်လိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိတွေ့မှု။ လူငယ် Soc ။ 4; 2006 (38): 2-135 ။
၅ ။ J Sex Res ။ 5; 2010 (47): 6-568 ။ [PubMed]
6 ။ ရှင်ပေါလု P. Pornified: ဘယ်လိုညစ်ညမ်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး, ငါတို့မိသားစုတွေကိုပြောင်းလဲနေသည်။ နယူးယောက်: Times သတင်းစာစာအုပ်များ; 2005 ။
7. ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်။ ဆယ်ကျော်သက်များအင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း J Commun ။ 2006; 33: 178-204 ။
8 ။ သြစတြေးလျအတွက်လူငယ်များအကြားညစ်ညမ်းမှရေလွှမ်းမိုးခြင်းအမ် Exposure ။ J ကို Sociol ။ 2007; 43 (1): 45-60 ။
၉ ။ Häggström-Nordin E၊ Sandberg J, Hanson U, Tydén T. “ နေရာတိုင်းမှာ!” ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ လူငယ်ဆွီဒင်လူငယ်များ၏အတွေးများနှင့်ထင်မြင်ချက်များ။ Scand J ကိုဂရုစိုက်သိပ္ပံ။ 9; 2006 (20): 4-386 ။ [PubMed]
10 ။ Wolak J ကို, Mitchell ကငွေကျပ်, Finkelhor ဃမလိုချင်တဲ့နှင့်လူငယ်များသည်အင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအမျိုးသားပြန်လည်နမူနာတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2007; 119 (2): 247-257 ။ [PubMed]
11 ။ Long bo, Chiemeke SC, Onifade OFW, Balogun FM ရေ, Long အက်ဖ်အေ, Otti Vu ။ တောင်ပိုင်းအနောက်တိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ Exposure: စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဂယက်ရိုက်။ JITI ။ 2007;7(3): 195-212 ။
12 ။ Ojedokun AA ကို။ Botwana တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အင်တာနက်နှင့်အသုံးပြုမှု။ Afri J ကိုလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ Arch သိပ္ပံအသိပေးပါ။ 2002; 11 (2): 97-107 ။
13 ။ Ajuwon GA ။ တစ်ဦးနိုင်ဂျီးရီးယားသင်ကြားရေးဆေးရုံအတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်ကလက်တွေ့နှင့်သူနာပြုကျောင်းသူကျောင်းသားများအားဖြင့်ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း။ BMC ဆေးပညာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ 2003;3(1): 10-15 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Odusanya ဦး, Bamgbala oa ။ ဂို့၏ဆေးပညာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်မှာနောက်ဆုံးနှစ်တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ပါးစပ်တွင်းကျောင်းသား၏ကွန်ပျူတာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု။ နိုင်ဂျာ Postgrad Med ဂျေ 2002;9(4): 189-193 ။ [PubMed]
၁၅။ Cooper A၊ Delmonico DL၊ Burg R. Cybersex အသုံးပြုသူများ၊ အလွဲသုံးစားပြုသူများနှင့် compulsives: တွေ့ရှိချက်အသစ်များနှင့်သက်ရောက်မှုများ။ လိင်စွဲ & compulsivity ။ 15; 2000 (7-1): 2-5 ။
၁၆။ Goodson P၊ McCormick D, Evans A. အင်တာနက်ပေါ်မှလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း - ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အပြုအမူနှင့်သဘောထားများကိုလေ့လာခြင်း။ လိင်လိင် Behav ။ 16; 2001 (30): 2-101 ။ [PubMed]
17 ။ Adebayo DO, Udegbe ခလရ, Sunmola လေး။ ကျား, မ, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း, နှင့်လူငယ်နိုင်ဂျီးရီးယားအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိမ်းညွတ်။ Cyberpsychol နှင့်ပြုမူနေ။ 2006;9(6): 742-752 ။ [PubMed]
၁၈။ Osakinle EO, Adegoroye BS, Tayo Olajubutu F. F. နိုင်ဂျီးရီးယား၊ အီကတီပြည်နယ်ရှိဆယ်ကျော်သက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မီဒီယာနှင့်နည်းပညာ၏အခန်းကဏ္။ ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း J ကိုသိပ္ပံ Res ။ 18; 2009 (4): 4-307 ။
19 ။ ကာရိုး JS, Padilla-Walker က LM, နယ်လ်ဆင် LJ, Olson CD ကို, McNamara ဘီစီ, Madsen SD က။ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို XXX: ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းလက်ခံမှုနှင့်အသုံးပြုခြင်း။ J ကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Res ။ 2008; 23 (1): 6-30 ။
20 ။ Wallmyr, G, Welin C. Young ကလူများ, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်; အရင်းအမြစ်နှင့်သဘောထားများ: ကလေးများနှင့်လူငယ်များကြားတွင်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏အတိုင်းအတာ။ SCH သူနာပြု၏ J ကို။ 2006; 22 (5): 290-295 ။ [PubMed]
21 ။ Inyang အမ်ဆိပ်ကမ်း Harcourt မြို့တော်, မြစ်ချောင်းများပြည်နယ်, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အမျိုးသမီးအလယ်တန်းကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်းအတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Sexologies ။ 2008; 17 (ပျော့ပျောင်း 1): S151 ။
22 ။ Odeyemi K ကို Onajole တစ်ဦးက, Ogunowo ခလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် Mushin ဈေးကွက်ထဲမှာကျောင်းကအမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်ထဲကတို့တွင်လွှမ်းမိုးအချက်များ, ဂို့, နိုင်ဂျီးရီးယား။ int J ကိုမြီးကောင်ပေါက် Med ကနျြးမာရေး။ 2009; 21 (1): 101-9 ။ [PubMed]
23 ။ Sunmola လေး, Dipeolu M က, Babalola S က, Adebayo OD ။ နိုင်ဂျီးရီးယား၏နိုင်ဂျာပြည်နယ်အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားမျိုးပွားမှုဆိုင်ရာအသိပညာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်တားဆေးအသုံးပြုခြင်း။ Afr J ကို Reprod ကနျြးမာရေး။ 2003;7(1): 37-48 ။ [PubMed]
24 ။ Prasertsawat စာတိုက်, ဘန်ကောက်မြို့တော်အတွက်အလယ်တန်းကျောင်းကျောင်းသား Petchum အက်စ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ J ကို Med Assoc ထိုင်း။ 2004; 87 (7): 755-759 ။ [PubMed]
25 ။ Egbochuku EO, Ekanem ခလရ။ အကြံပေးခြင်းအလေ့အကျင့်များအတွက်ဂယက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ဆီသို့နိုင်ဂျီးရီးယားအလယ်တန်းကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏သဘောထားကို။ EUR J ကိုသိပ္ပံ Res ။ 2008; 22 (2): 177-183 ။
26. ဘရောင်း JD, L'Engle KL ။ X- အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ။ Commun Res ။ 2009; 36 (1): 129-151 ။
27. De Jose EG ။ ဖိလစ်ပိုင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ၊ Interdisciplinary လေ့လာရေး၏ပညာရေးဂျာနယ်။ 2013;2(8): 717-727 ။